Fikarohana momba ny firaisana Raharaha fanaleovan-tena momba an'i Sadhona Bose | Shah Rukh Khan: Tapitra ny fiainana mandritra ny fiainana taloha sy ny fahatokisan'i Lady Gaga amin'ny famerenana indray - fikarohana Reincarnation
From: Teraka indray, Indian version, by Walter Semkiw, MD
Ny fiainan'ny Shah Rukh Khan taloha ho toy ny vehivavy mpandihy Indiana
Tao amin'ny fivoriana niaraka tamin'i Kevin Ryerson, nanontany momba an'i Shah Rukh Khan aho, izay nofaritana ho indimy i India. Ahtun Re dia nanambara fa i Mr. Khan, fony fahavelony taloha, dia vehivavy mpandihy Indiana sy mpilalao sarimihetsika izay niaina nandritra ny taona voalohandohany tao amin'ny sinema Indiana. Taorian'ny fikarohana vitsivitsy, nahita kandidà iray aho tao Sadhona Bose. Nandritra ny fivoriana nanaraka tamin'i Kevin Ryerson, Ahtun Re dia nanamafy izany Shahrukh Khan dia ny vatana vaovao indray Sadhona Bose, izay niaina tamin'ny 1914 ka hatramin'ny 1973.
Ny fiainan'i Sadhona Bose
Sadhona dia mpilalao sarimihetsika sy mpandihy avy any Calcutta, tanàna izay antsoina ankehitriny hoe Kolkata. Nampiofanina tamin'ny dihy karazana Indiana i Sadhona, saingy nanao baolina koa izy. Tao amin'ny 1929, niasa niaraka tamin'i Anna Pavlova izy tamin'ny dikan-teny etikety Alibaba. Ny sarimihetsika malaza indrindra aminy Raj Nartaki, izay navotsotra tany Etazonia Court Dancer. Sadhona Bose koa namoaka ilay fampisehoana, Rhythm of Victory, fanjonoana iray izay nampiseho ireo mpandihy 40.
Ny fiainana taloha talenta: Dihy fahafahana an'i Shah Rukh Khan
Fony mbola zazalahy i Shah Rukh Khan dia nofaritana ho extrovert miaraka amina tsipika mahatsiravina. Tany am-pianarana dia tiany ny nampiala voly ireo mpiara-mianatra aminy tamin'ny fanahafana ireo mpampianatra sy olo-malaza. Shah Rukh Khan dia liana tamin'ny teatra taloha ary nahazo mari-pahaizana Master momba ny sarimihetsika sy ny asa fanaovan-gazety.
Ny talentan'ny dihy tao Sadhona Bose dia naseho voalohany tao amin'ny asan'i Shah Rukh Khan, izay nanao ny asan'ny mpandihy tao Barry John, tale malaza sy mpilalao fanta-daza iraisam-pirenena. Namokatra i John Annie Get Your Gun miaraka amin'ny tarika Theatre Action Group any New Delhi. Nangataka andraikitra ho an'i John i Shah Rukh Khan ary nilatsaka ho mpandihy lehilahy amin'ny famokarana izy. Barry John dia nanamarika ny talenta an'i Shah Rukh Khans: "Mahafinaritra ny fahaizany mime sy clown, ny fahaizany mandihy ary ny fahaizany manao gym." (1)
Shah Rukh Khan dia nanao mozika hafa, anisan'izany Magicien ny Oz, ary manohy mizatra amin'ny famokarana mozika. Tao amin'ny 2004, dia nanao hira roa sy dihy roa volana izy izay nahitana toerana tany Eoropa sy Amerika Avaratra.
Ny tantaram-pitiavana an'i Shah Rukh Khan sy Gauri Chhiba
Ampahany iray mahaliana amin'ny fiainan'i Shah Rukh Khan ny tantaram-pitiavany sy ny fanambadiany Gauri Chhiba. Shah Rukh Khan dia Silamo, ary ny Hindu kosa Gauri Chhiba. Noho izany, ny toetrany dia manana kalitao Romeo sy Juliet, satria ny fivavahana samihafa dia niteraka fahasarotana tamin'ny fifandraisana.
Indray mandeha, Gauri Chhiba dia nandeha tany Mumbai ho irery, tsy nampahafantatra an'i Shah Rukh Khan. Ity fisarahana tsy nampoizina ity dia nitarika tamin'ny famoahana an'i Rukh Khan fa tokony hiaraka amin'i Gauri izy. Na dia tsy fantany aza ny toerana misy azy ao Mumbai, tanàna lehibe, dia nandeha tany izy mba hitady azy.
Fantany fa tia tora-pasika i Gauri, tamin'ny andro farany nandehanany tany Mumbai, nangataka mpamily fiarakaretsaka izy mba hanomezana tolo-kevitra momba ny tora-pasika azony atao mba hahitana ny vadiny. Niteny tamin'i Rukh Khan ilay mpamily mba hanandrana ny Aksa Beach, izay nahitany an'i Gauri. Nanaiky izy ireo ary nahafantatra fa natao hifanampy izy ireo.
Amin'ny ankapobeny, rehefa misy fifandonana mahery vaika eo amin'ny olona, ​​toy ny fanehoana ny fifandraisan'ny Shah Rukh Khan sy Gauri Chhiba, dia matetika misy fifandraisana amin'ny fiainana taloha. Tsara ny manadihady ny tantaran'ny fifandraisana misy eo amin'ireo olona roa ireo, mandritra ny androm-piainany.
Walter Semkiw's Teraka indray & Om Shanty Om
Ny mahaliana, rehefa ny bokiko ateraka indray dia nivoaka tao India tamin'ny 2006 ary nadinadinako tany India tamin'ny CNN-IBN, i Shah Rukh Khan dia teo antenatenan'ny fanaovana sarimihetsika. Araka ny hevitry ny Times of India, Shah Rukh Khan dia namela io famokarana io mba hampanan-karena amin'ny fampahalalam-baovao ateraka indray natao hahatonga sarimihetsika amin'ny vatana vaovao indray. Izany sarimihetsika izany Om Shanty Om, sarimihetsika mampientanentana mahafinaritra izay nankafy iraisam-pirenena.
Om Shanti Om dia navoaka tamin'ny novambra 2007 ary nandefa horonan-tsarimihetsin'ny birao, mitentina 800 tapitrisa manerantany manerantany, ary nanjary ny horonantsary Hindi avo indrindra indrindra amin'ny fiteny rehetra.
Lady Gaga & Reincarnation
Ankoatra ny mahaliana, Lady Gaga dia nanadihady an'i Shah Rukh Khan fony izy tany Inde. Anatin'ity tafatafa ity, araka ny notaterina tao amin'ny Times of India and ao amin'ny tranokala Digital Spy, dia nanambara ny finoany ny vatana vaovao indray izy.
Ao amin'ny resadresaka nataon'i Shah Rukh Khan, Lady Gaga dia nilaza hoe: "Nanjavona indray aho"
"Nolazain'i Lady Gaga tamin'ny kintan'i Bollywood Shah Rukh Khan fa inoany fa navaozina indray izy. The Teraka Izany Mpanakanto iray no nanadinadina ny kintan'ny filma Indiana nandritra ny diany vao haingana tany Inde, hoy ny tatitra Ny Times of India
'Mino aho fa afaka hateraka indray hatrany hatrany ianao,' hoy i Gaga nanazava. 'Mino aho fa rahavavin-draiko. Maty ny rahavavin'ny raiko fony izy 19 taona ary mino aho fa miaraka amiko ny fanahiny ary mino aho fa izaho dia teraka tao amin'ny vatana vaovao indray. '”
Nandritra ny fotoam-pivoriana dia niaraka tamin'i Kevin Ryerson aho, nanontany an'i Ahtun Re aho, ilay fanahy izay nampitain'i Kevin izay naneho ny fahaizan'ny fiainana an-dàlam-pahavitrihana tamin'ny fomba marina, na ny finoan'i Lady Gaga fa izy no fampodiana indray vao teraka tamin'ny nenitoany. manan-kery. Ahtun Re dia nanamarika fa marina izany. Raha te hianatra bebe kokoa, mandehana any amin'ny: Tranom-pitaovam-pandrindrana an'i Joanne Stefani Germanotta | Lady Gaga
Fitoviana ara-batana: Na dia eo aza ny fanovàna ny lahy sy ny vavy, dia misy ny fitoviana amin'ny endriky ny endriky ny endrika Shah Rukh Khan sy Sadhona Bose.
Fiovàna eo amin'ny lahy sy vavy, na dia mbola teraka indray ny vatana: Shah Rukh Khan dia lehilahy ary vehivavy Bose.
Fiovana amin'ny finoana amin'ny alalan'ny fanambadiana: Vehivavy Hindo i Bose, ary i Shah Rukh Khan dia Miozolomana.
Innate Past Life Talent: Ny dihy, ny hira ary ny talentan'i Sadhona Bose dia nambara tamin'ny asan'i Shah Rukh.
Ny fihenam-bidy: Maty tamin'ny 1973 i Sadhona Bose, raha i Shah Rukh Khan kosa teraka tao amin'ny 1965, izay maneho fiheverana valo taona. Ian Stevenson, MD an'ny Oniversiten'i Virginia namoaka tranga fahaterahana indray ao amin'ny vatana vaovao izay nifandona nandritra ny androm-piainany, izay nantsoiny hoe "daty tsy ara-dalàna."
Jereo ny Horonan-tsarimihetsika momba ny Reellarnation viralala: Porofon'ny maha-teraka indray ao amin'ny vatana vaovao
1. Biswadeep Ghosh, Hall of Fame: Shah Rukh Khan, Company Publishing Magna, 2004, p. 46